Saadaalin Akhriste | Martech Zone
Haddii aanan haysan wax aan ku qoro boggeyga, sida caadiga ah waxaan sameeyaa xoogaa baarin ah oo aan ka helayaa xiriiro aan caadi ahayn oo aan kuwaa la wadaago. Haddii aad waqti siineysid inaad ku laabato degelkeyga ama aad uqorto quudintayda, waxaan rabaa inaan hubiyo inaanan waqtigaaga ku lumin anigoo nus-u-qiimaynaya boostada.
In kasta oo dadaalkaygu jiray, qaar ka mid ah qoraalladaydu waa istiinyahanno kuwa kalena waxay helayaan taxaddar aad u badan. Ka dib markii aan blog gareeyay sanado hada, wali macquul iima ahan inaan saadaaliyo aqristaheyda. Waxaan u maleynayaa inay aad ugu egtahay daafac gadaashiisa isku dayaya inuu saadaaliyo ciyaarta soo socota. Kooxaha kubbadda cagta ee badiyaa waxay leeyihiin isku dheelitirnaan iyo fallaadho yar. Waxay u ciyaarayaan hoos kasta sida ay tahay markii ugu dambeysay. Kubadda cagta, waxay yiraahdaan, waa ciyaar inji ah.
Ku guuleysiga balooggu waa isku mid. Khadka weerarka weyn wali waa la eryi karaa oo lumin karaa xoogaa yar, laakiin guud ahaan, horay ayey u sii wadi doonaan oo kan ugu horreeya ayey hoos u dhigi doonaan. Ma saadaalin karo kan ka mid ah qoraaladayda (kubbadda cagta = ciyaaro) ayaa i gayn doonta aagga dhamaadka. Waan ogahay in is waafajin badan iyo fallaadho yar ay halkaas i geyn doonaan, in kastoo.
Natiijo ahaan, kama walwalayo haddii iyo in kale this boostada ayaa noqon doonta mida kaliya, waxaan ogahay oo kaliya hadii aan sii wado blog-ga in badan oo si fiican u qoro inaan sii wadi doono kasbashada akhristayaasha (kubbadda cagta = yardage). Tartanku waa adag yahay, in kastoo.
Waqtigan xaadirka ah waxaan ka soo horjeedaa qof walba oo fasax ah, qof walba qoraaladiisa ugu fiican ee 2008 iyo qof walba saadaashiisa sanadka 2009. Tartanka dhabta ah aniga waa ila jiraa, in kastoo. Tartanku ma helayo waqti lagu dhejiyo. Tartanku ma baaraya qoraal sifiican ugu filan inuu kaaga tago maskaxda maskaxda ee aad u timid.
Sawir cajiib ah by Brian Cassella, sawirqaade
Sannadkii 2008, balooggu wuxuu leeyahay qiyaastii rubuc milyan milyan oo soo booqdeyaal ah oo ay la socdaan ku dhowaad 2,000 oo macaamiisha ah (emayl + RSS). Kama aanan sii wadin koritaanka balooggan aan horey u haystay - badanaa tartankeyga awgood. Isbedelada shaqada ayaan ii saamixin inaan waqtiga iyo dadaalka geliyo barta ay tahay inaan yeesho. Dhawaan, waxaan dib u rogay tirooyinkaas waxaanan dib ugu soo laabtay kor u kaca mar labaad.
Waxaan rajeynayaa inaan dhowr ka helo aagga dhamaadka sannadka 2009!
Tags: aragtida xayeysiintaclipsyncdesign graphicsidaxeeladaha ku habboon hagaajinta mashiinka raadintaxiriiriyeyaasha slidesharekali
28, 2008 at 8: 48 PM
Inta badan baloogyada ayaa ka baxsan-cabbirka, faallo shakhsiyeed oo lagu taageeray toban daqiiqo mashiinnada raadinta. Waxa layaabka leh ma ahan in qaar fiican yihiin qaarna xun yihiin, ama xitaa in qaar ay caan yihiin qaarna aysan fiicnayn. Waa wax aad u xiiso badan oo aan si qarsoodi ah cun iyo ixtiraam waxyaabaha kaliya ee ka dhib yar wadahadalka joogtada ah.
Waxaan saadaalinayaa in saadaalinta akhriska – iyo sidoo kale akhristayaasha halista ah-ay sii adkaan doonto maaddaama balooggu uu sii korayo caankiisa. Ilaa ay ifafaalahan ka degto ayaan awoodi doonnaa inaan rajeynno inaan fahamno saameynteeda dhabta ah.